Milazalaza ny fihoaram-pefy any am-ponjan’i Vietnam ny renin’ny bilaogera migadra Le Anh Hung · Global Voices teny Malagasy
Volaza ho ampijaliana ara-tsaina ny gadra politika
Voadika ny 23 Marsa 2020 3:10 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Español, عربي, Esperanto , English
Ny lahatsoratra dia avy amin'ny The 88 Project (tetikasa 88), tranonkalam-baovao miahy tena iray mitantara an'i Vietnam, ary navoaka ato amin'ny Global Voices indray araka ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Iray amin'ny endrika fihoaram-pefy ara-toetsaina any am-ponja Vietnamiana ny fandefasana gadra any amin'ny toeram-pitsaboana ara-tsaina tsy araka ny sitrapon'ireo gadra, na dia tsy nahitana soritr'aretin-tsaina toy izany aza ry zareo nandritra ny androm-piainany. Ohatra iray amin'izany ny raharaha Le Anh Hung. Nohazonina tany amin'ny toeram-pitsaboana marary saina nandritra ny folo andro rehefa nosamborin'ny polisy tany amin'ny toeram-piasany i Hung tamin'ny taona 2013.
Nosamborina indray i Hung tamin'ny 8 Jolay 2018, araka ny Andininy 331 amin'ny Lalàna famaizana (heloka bevava) taona 2015, fa hoe “manararaotra ny fahalalahana demaokratika manitsakitsaka ny tombontsoan'ny fikambanana sy ny tsirairay”. Nogadraina mialoha ny fotoam-pitsarana izy nanomboka tamin'io fotoana io.
Tamin'ny 1 avrily 2019, namindra tampoka an'i Hung tany amin'ny Hopitaliben'ny Fitsaboana marary saina ny antokon-draharahan'ny famotorana ao amin'ny filaminam-bahoaka ao Hanoi. Tamin'ny 24 Avrily, rehefa nanao fizahana ny fahasalamany ara-tsaina ny toeram-pitsaboana, dia nafindran'ny manampahefana tany am-ponja indray i Hung, saingy mbola nalefa tany amin'ny hopitalin'ny marary saina indray izy tamin'ny volana mey. Mbola manjavozavo ny antony hamezivezena azy hatrany toy izany.
Araka ny nolazain'ny fianakaviany, tao anatin'ny fizotran-draharaha, hita ho reraka dia reraka, kaozatra, ary tsy salama izy amin'ny ankapobeny, saingy nandrisika ny olona hihetsika amin'ny anarany ary hitaky amin'ny manampahefana hampitsahatra ny fanerena azy hotsaboina ara-tsaina.
Tamin'ny Jona 2019, nandefa taratasy fangatahana tany amin'ny manampahefana ny renin'i Hung mangataka ny hamotsorana azy mba ahafahany mitsabo azy ao an-tranon'ny fianakaviana. Nilaza ramatoa fa niharatsy ny toe-pahasalaman'ny zanany ary latsaka ambany ny herin-tsainy rehefa noterena hotsaboina ara-tsaina ao am-pigadrana izy. Talohan'ny fanagadrana azy (anefa), nilaza ramatoa fa salama sy tomady i Hung, na ara-batana na ara-tsaina. Tsy hay hoe nanao ahoana izay ny nandraisan'ny manampahefana ny taratasy saingy mbola migadra aloha i Hung.
Vao haingana ny The 88 Project (Tetikasa 88) no nitafa tamin-dRtoa Tran Thi Niem, renin'i Hung, amin'ny mahazo ny zanany amin'izao fotoana sy ny faniriany hitsabo azy ao an-trano. Niantso ny firaisamonina iraisampirenena izy hiteny hampamotsotra an'i Hung. Jereo ny antsafa eto ambany:
Tamin'ny herinandron'ny 8 marsa 2020 ny namany mpiara-mikatroka, namoaka fa niantso an-dreniny i Le Anh Hung hampahafantatra fa mbola nakarin'ny manampahefana indray ny daozin'ny fitsaboana saina omena azy, izay terena hohaniny tsy araka ny sitrapony. Voalaza fa noresahan'i Hung tamin-dreniny fa tena mamparary azy mafy ny fanafody, saingy tsy manana safidy afa-tsy ny mandray azy izy, ary niangaviany ny reniny hiantso ny firaisamonina iraisampirenena hampahafantatra ny mahazo azy.